दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्यालाई सहि समाधान गर्ने सय प्रतिशत प्राकृतिक र प्रभावकारी घरेलु औषधी - ज्ञानविज्ञान
एक चम्चा तीलको तेलमा ३/४ थोपा ल्वङको तेल मिसाएर हरेक बिहान खाली पेटमा यस तेलले कुल्ला गर्ने । यसको साथै तील र ल्वङको तेललाई बराबर मात्रामा मिसाउने । एउटा कटनको डल्ला यो तेलमा चोपेर दुखेको दाँत वा किराले खाएर खाली भएको दाँतको बीचमा राखेर १० देखि १५ मिनेट सम्म दबाएर च्याप्ने ।
यस विधिलाई दिनको ३/४ पटक प्रयोग गर्नको लागि तील र ल्वङको तेलको मिश्रणमा ३/४ ओटा कटनको बललाई चोपेर एउटा कन्टेनरमा राख्ने । त्यसपछि हरेक पटक खाना खाए पछी यस कटन बललाई १०-१५ मिनेटका लागि दाँतको बीचमा च्यापेर राख्ने । यसो गर्नले दाँतको दुखाईलाई तुरुन्तै ठिक गर्नुका साथै दाँतमा हुने किरालाई सधैँको लागि निकालीदिन्छ ।
आउनुहोस् जानीराखौं बेकिङ सोडाबाट घरमै कसरी टुथपेस्ट बनाउने
Don't Miss it के तपाई दिमागमा धेरै कुराहरू खेलेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी छुटकारा पाउनुहाेस्
Up Next सावधान ! खाना खाने बित्तिकै यस्ता काम नगर्नुहोस्